ယခုနှစ်စတွင် မွန်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်? - Yangon Media Group
ယခုနှစ်စတွင် မွန်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်?
မွန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
မွန်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအနေ ဖြင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းသုံးခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် အစည်းအဝေးမှာ ကော်မတီက ခွင့်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၂၃ဝဝ ကျော်၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်းမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝဝဝ ကျော်နဲ့ ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမယ်လို့ သိရတယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းသိန်းဦးက ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ပြောသည်။
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်းများကို သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ကျိုက်ခမီမြို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးမှသိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် မွန်ပြည်နယ်သို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ခု၊ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးခုတို့ကို ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီမှ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုရာတွင် ငွေကျပ်သန်း ၆ဝဝဝ အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းများကို ပြည်နယ်ကော်မတီက ခွင့် ပြုပေးနိုင်ပြီး ငွေကျပ်သန်း ၆ဝဝဝ အထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC က ခွင့်ပြုသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နေသော လုပ်ငန်း ၅၉ ခုရှိပြီး မွန် ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းခြောက်ခု စုစုပေါင်း လုပ်ငန်း ၆၅ ခုရှိကြောင်း စာရင်းအရ သိရသည်။
နေရပ်ပြန် လုပ်သားများ မြဝတီအမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေး တံတားကြီးမှသာ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော့
အမေရိကန် အနောက် အလယ်ပိုင်းတွင် အလွန်အေးသည့် နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်
”ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကို လိုက်ရိုက်ပေးတာမျိုးတွေကတော့ မြန်မာမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာမှာလ??
ကျေးလက်နေပြည်သူများ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရန် ခက်ခဲ၊ ကုသမှုနောက်ကျကာ အပ်နှင့်ထွင်းရမည
တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် ဆရာ ဆရာမများ၏ စာမေးပွဲခန်းကြီးကြပ်ခများကို ရက်အလိုက် သတ်မ?
ဆံပင်အစားထိုး ကုသမှုခံယူခဲ့သော ဒိုင်လူကြီးဟောင်း ကလက်တန်ဘတ်